ယနေ့ပို့စ် (နိုဝင်ဘာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ယနေ့ပို့စ် (နိုဝင်ဘာ)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 1, 2012 in Best Web Awards | 29 comments
ချစ်သူ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ အသက်ရှင် နေထိုင်ချင်မိတယ် …
ရစ်သူ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ အသက်ရှင် နေထိုင်ချင်မိတယ် ….
မုန်းသူ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ အသက်ရှင် နေထိုင်ချင်မိတယ် ….
ထုံးဖြူဖြူ စေတီလေးအနားမှာ အေးဆေးစွာ တရားထိုင်ချင်မိတယ် …
မေတ္တာတွေ အမွန်းတင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ရှင်သန်ချင်မိတယ် ….
မြို့ပြရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေနဲ့ အဝေးဆုံးကို ပြေးထွက်လို့ သွားချင်မိတယ် …
ဘယ်အရာကိုမှ မရ၊ မပိုင်ဆိုင်ချင်ဘူး …
အရာအားလုံးကို ဖမ်းဆုပ်ထားချင်မိပြန်တယ် …
ဟိုဟာ၊ ဒီဟာ ရေရေရာရာ မရှိ …
ချစ်ချင်မိ၊ မုန်းချင်မိ …
ငါ့စိတ်ကို ငါမသိ …
ယခု စာတွေဟာလည်း ဂလိုသာ ဖြစ်ပါတော့၏ … ခွိခွိ …
(… ဤသည်ကား စာပါအောင် ရေးသားခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပါ၏ …)
ဂေဇက်ပို့စ်များ စုစည်းမှု (နိုဝင်ဘာ)
“လိမ္မာရေးခြား အမေးအဖြေများ”(အမေနှင့်ကျမ) aye.kk Read Here None
ပြင်ဦးလွင် တန်ဆောင်တိုင် ၂၀၁၂ ရွှေ မင်း သား Read Here None
ပု ထု ဇဉ် ဆို သည်မှာ လေ —မိုးကျေ၇ွှကိုယ်- Read Here None
“နံနက်ခင်းအရုဏ်တက် စစ်ကိုင်းတံတားဘက်ဆီသို့” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သုရှင်….အလွမ်းပြေ candle . Read Here None
ထိုအခါက ခင်ခ Read Here None
ရွှေတိဂုံ ဘုရား မှ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် Shwe Tike Soe Read Here None
တပ်မတော်သား ကျွန်တော့်အဖေ Shwe Tike Soe Read Here None
ရှက်လွန်းလို့ပါနော် Mr. MarGa Read Here None
“နွေဧပရယ် လွမ်းချင်းနဲ့နောင်တ ပိတောက်” Thaw Zin Loikaw Read Here None
အဲဒီနေ့က … (ကဗျာ) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
တွက်ကြည့်တာပါ Mobile နှုန်းများ တိမ်မည်း Read Here None
ဝမ်ပေါင်ကို သန်ကောင်မှတ် bacteria ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
** ပြုံးကဲဖို့ ရာ သုံးပွဲပါ ** မောင်ပေ Read Here None
အကြောက်တရားမှ လွတ်မြောက်ခြင်း Courage Read Here None
ဝိုင်းဆဲဂျပါခင်ဗျား Kai ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
အခါခါ ခင်ခ Read Here None
လေဖြတ်နိုင်ဖွယ် အချက် (၁၀)ချက် ခင်ခ Read Here None
ဂန့် = သေ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ငရဲမီးစုန်းမြူးတဲ့  ည surmi Read Here None
ဟဲ့…ခွေး Thu Wai Read Here None
iPhone Development Companies Exploring ios SDK zipper john Read Here None
လက်ပံတောင်းတောင်အတွက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ Ko Khin Lwin Read Here None
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့အတွက် ဦးမာဃရဲ့ လက်ဆောင် Mr. MarGa Read Here None
ပြင်ဦးလွင်မှ အပြန်လမ်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဆူး Nay Chi Read Here None
ပြုံးမိလေသော ဘလက်ချော…။ blackchaw Read Here None
သပိတ်စုံ သူပုန်ထ Rebllion ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ရ = ရသင့်တာလေးတွေတောင် အလင်းဆက် Read Here None
” ငါး” မရှိလို့ ” ဖား” စွန် Ko out of… Read Here None
တန်ဆောင်မုန်းမှာ မောင်ပြုံးနိုင်ဖို မောင်ပေ Read Here None
How create modern Android application devices zipper john Read Here None
ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အမှားများမှ TheWinner Read Here None
အကျွန်နုပ်တို့ဗုဒ္ဓ၏…..ဗုဒ္ဓ၀င် myanmar oscar Read Here None
ဘယ်ကိုများ ပြန်ရပါ့ စိုင်း ကွမ်းခေး Read Here None
“၀ါးလုံးခေါင်းထဲမှာ သာတဲ့လ”(EPISODE 17) nicolus agral Read Here None
မေမြို့သို့မဟုတ်…………………သို့တစ်ခေါက် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဧရာဝတီတိုင်း + ပြည်နယ်၂ က(၁၀)တန်းဖြေမဲ့ကျောင်းသားဒေတာတွေ Davit Read Here None
ဘ၀သစ်နှင့်သဟဇာတ ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
အလွမ်းပြေ သုရှင် Read Here None
Magento community edition best open-source .. zipper john Read Here None
သူဌေးဆိုပြီး ဒီလို မပြောနှင့် နွေဦး Read Here None
မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ ပထမဦးဆုံးရရှိသည့် ပူးတွဲပထမဆု မောင်သုည Read Here None
ဖုန်းထဲတွင် အင်တာနက်ဆော့ဝဲများအမြဲ run မိမှာစိုးလို့ ခင်ခ Read Here None
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း kai Read Here None
တဏှာ မပါသော အနမ်း candle . Read Here None
နာမ် padauk moe Read Here None
ဒါတွေသိမှ Internet ကို ဖုန်းနဲ့ သုံးပါ the best Read Here None
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၁၀) aye.kk Read Here None
ဆောင်း…… padauk moe Read Here None
မန္တလေးဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း (Nov 2012) kai Read Here None
အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအကြောင်း – မောင်စွမ်းရည် kai Read Here None
အိမ်အပြန် အမှတ်တရ koaung Read Here None
တောင်သမန်ရင်ခွင်မှလှေကလေးများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဆက်လျှောက်မလား ရပ်မလား uncle gyi Read Here None
တောင်ပေါ်က တယောသံ (ဇာတ်သိမ်း) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ကိုသစ်မင်းအတွက် ကျွန်တော်နဲ့ နိုဇိုးမိ…။ blackchaw Read Here None
ကထိန် အလှူ သာဓု ခေါ်နိုင်ကြပါစေသော် နွေဦး Read Here None
ကြွေရောင်အိပ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
မကျက် တကျက် ဒီမိုကရေစီ၊ ဘွန်ဇိုင်း အမိမြေ၊ နီပေပါ Read Here None
“မျက်နှာစုံညီ ယုံကြည်သလောက်ဆွေးနွေး သွေးအေးအေးရင်ဆိုင်” nicolus agral Read Here None
အစာပိတ်တနင်္လာ မောင်ပေ Read Here None
တွေး padauk moe Read Here None
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နှင့် သိမ်မွေ့နက်နဲခက်ခဲသော မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု Read Here None
Help Wanted. Looking for Editor … arthuryoe Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၂ ) ( လက်ပံတောင်း ) Foreign Resident Read Here None
နွေညအိမ်မက်ရှည် စိုင်း ကွမ်းခေး Read Here None
“လက်ဆော့လက်ဆော့ …………..လက်ဆော့” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
တစ်ခါတစ်ခါ attach ment Read Here None
မဟုတ်တရုတ် ပလုပ်တုတ် China ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
အမှားတရံ အမှန်တရား padauk moe Read Here None
နောင်တအစဉ် padauk moe Read Here None
အမှောင်စအား ဆွဲခြုံသူ Nay Chi Read Here None
sunday မှာ အလှမ်းမဝေးဖို့မောင်ပေ Read Here None
သားကို ပြန်လည်ပြောပြဖြစ်တဲ့ အကြောင်းများမှ TheWinner Read Here None
sunday ပွဲများထဲမှ foot y Read Here None
sunday ပွဲများမှသည် foot y Read Here None
“လက်ဆုပ်လက်ကိုင်” Thaw Zin Loikaw Read Here None
ပထမဆုံးအနမ်း(First kiss) •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ကာလတို့၌ အသက်သွင်းအပ်သော အော်ပ၇ာ မိုးကျေ၇ွှကိုယ် Read Here None
လူသားတို့ အတွက် အဆိုးယုတ်ဆုံးသော တ၇ားတွေ မို့မိုးကျေ၇ွှကိုယ် Read Here None
ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား ပြဿနာ ရှင်းတမ်း Myat Min Read Here None
ဇလီဖားတုံးတွေ ရေတွက်ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထိုတနေ့ မင်းနန္ဓာ Read Here None
ပုံပြင် နှင့် ပဟေဠိ ၀ါသနာရှင်များအတွက် Mobile Read Here None
“လွှတ်ချစရာတွေအများကြီး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကျမရဲ့ဒီည Nay Chi Read Here None
အဖြေမသိသော ပုစာ Thaw Zin Loikaw Read Here None
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ရပ်၏ဓာတ်ပုံများ •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
အယ်လ်ကိုဟော၏ ကနဦး ရာဇ၀င် Shwe Ei Read Here None
စနေညအတွက် ကျုပ်အုန်းစားခဲ့တာ ဒီလို မောင်ပေ Read Here None
Help Wanted. Looking for computer […] arthuryoe Read Here None
နားခိုရာ padauk moe Read Here None
အတူတူပျော်လိုက်ရအောင် padauk moe Read Here None
ချရေးမိသောကဗျာတချို့ ရွှေ ကြည် Read Here None
ငြိမ်းချမ်းမှု Courage Read Here None
စာပေဆုအစီအစဉ်သစ်တမျိုး စဉ်းစားခဲ့မိခြင်း ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ XVI Kyaemon Read Here None
SO BAD to see you စိုင်း ကွမ်းခေး Read Here None
” အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခ” ဦး ကျောက်ခဲ Read Here None
ယူကေ ကBinnie နဲ့Halcrow ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ Kyaemon Read Here None
ကိုပေါက် လက်ဆော့ခဲ့တဲ့တောင်သမန် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
တစ်ချို့တစ်ဝက် ပိုင်းဖြတ်ကြည့်တဲ့အခါ lynnsatyar Read Here None
ဆွဲဆောင်မှုရှိသူများ Khaing Khaing Read Here None
သူသည် လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် သူရဿဝါ Read Here None
မကာရဖွား အင်္ဂါသား သို့ ခိုင်ဇာ Read Here None
“ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ဦးမှာ (၂)”(EPISODE 13) nicolus agral Read Here None
ဂဇက်ရွာလူစွမ်းကောင်းများနှင့် အင်တာဗျူးခြင်း…။ blackchaw Read Here None
အကြွေ တစ်ဇောက်ကန်း Read Here None
“ပြည်ထောင်စုကိုချစ်” nicolus agral Read Here None
ရှာဖွေတွေ့ ရှိခြင်း အလင်းဆက် Read Here None
ကြိုးပျက်သွားသော သံယောဇဉ် padauk moe Read Here None
Why PHP involved with Rapid Application Development zipper john Read Here None
N ကြယ်မင်း ရဲ့ ပွဲကြို အနုပညာ…။ blackchaw Read Here None
မန်းဂဇက်မှ ထပ်မံ ထည့်သွင်းမည့် စည်းကမ်းဂျက်များ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ထိုင်နိုင်ငံမှ Sim Card များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအကြောင်း Mobile Read Here None
ထလော့… တိမ်မည်း Read Here None
ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ မဲဇလီဖူး။ ခင်ခ Read Here None
အင်းကြီးတောင်သမန်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲက နံနက်ခင်းလေး တစ်ခု ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သံတွဲဈေးအိမ်သာ အားယခင်နေရာဟောင်းနေရာသို့ Nu Than Read Here None
ဖတ်ရွေး အဖွဲ့ကြီးသို့ ၀တ်လစ်စလစ် ပေးစာ Inz@ghi Read Here None
အားလပ်ရက် ၆ – (ပွဲဈေး – တက်တူး) Mလုလင် Read Here None
Magento templates attract the online customers zipper john Read Here None
“ရွှေ” နှင့်ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတ Mobile Read Here None
တောင်ပြာတန်းမှာ မိုးတွေရွာ Thaw Zin Loikaw Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၉) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
သပွတ်အူ ရှင်းတမ်း Courage Read Here None
ပွေးကိုင်း မယ်ဇလီပန်းလေးများ weiwei Read Here None
ကျ ရှူံး ခြင်း၊ အောင် မြင် ခြင်း yan lay Read Here None
လွမ်းလှပါတယ် ပြည်မြန်မာရယ် padauk moe Read Here None
အရောင် padauk moe Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၁ ) ( ညံ့ကြေး ) Foreign Resident Read Here None
နားလည်ပေးပါ တိမ်မည်း Read Here None
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပုံရှာနည်း မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
နံနက်ခင်းမှာတွေ့ရတဲ့မန္တလေးတောင်အလှ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မန့် ခြင်း အမှူ ( ကဗျာ ) တိမ်မည်း Read Here None
စိတ်ချမ်းမြေ့လို့ ပျော်ရွှင်စွာနေ နေကြပါရဲ့။ ဦးခင်ခ Read Here None
မကြည်ပြာ အား တူးခြင်း Inz@ghi Read Here None
စိတ်မာဆတ် (၃) blackchaw Read Here None
ရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၉) aye.kk Read Here None
အချစ်ဒဏ်း( padauk moe Read Here None
21-11-2012 ညမှာဒီလိုလေးတွေ ရှိတယ် Mobile Read Here None
ယ = ယိမ်း …. က ကြမည့် ……လက်တို့၏ ရာဇ၀င် အလင်းဆက် Read Here None
“တစ်ခါက နှင့် အချစ်နိဒန်း ၊ အလွမ်းစာကိုယ် ၊ ………….နိဂုံး” surmi Read Here None
အလုပ်ရှုပ်သူ ခိုင်ဇာ Read Here None
အမှတ်တရ အိုဘားမား thit min Read Here None
မုံရွာမှာလက်ဆော့ခဲ့သမျှ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Obamaမိန့်ခွန်း ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
မြန်မာ-အမေရိကား ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖေါက်ပြီးနောက်ဝယ် maungmoenyo Read Here None
အုံးစားရတဲ့ ၂၀၃၂ Inz@ghi Read Here None
ပညာ့ဥယျာဉ် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်း ဆူး Read Here None
ယောင်ထုံးခေတ် ကုန်ခဲ့ပါပြီ zaw win Read Here None
အမေစုရဲ့ မျက်ဝန်းအ်ိမ်မှာ မျက်ရည်ဝဲတဲ့နေ့ zaw win Read Here None
ယောင်ခြောက်ဆယ် jullies cezer Read Here None
ဒေ၀ါလီပွဲတော်ည သကြားလုံးကြော် Read Here None
Privacy & Transparency ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
သံတွဲမြေစာရင်း ဌာန […] than shwe mg Read Here None
တောင်ပေါ်က တယောသံ – (လေး) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
“ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ဦးမှာ (၁)”(EPISODE 12) nicolus agral Read Here None
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ်များပြီးခါနီးချိန် မောင်ပေ Read Here None
ရန်ကုန်ရှုခင်းများ thureinmaung Read Here None
၂၀-၁၁-၂၀၁၂ ညမှာကန်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်များ Mobile Read Here None
အိနြေ္ဒရရ သလ္လာမြေ အလှ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အားလပ်ရက် – ၅ Hard-Disk ကို မွှေနှောက်ခြင်း Mလုလင် Read Here None
အိုဘားမားမြန်မာပြည်ရောက်ရောက် ချင်းပြောတဲ့စကား Thu Wai Read Here None
စိတ်ကောက် ကြယ်သီးလေးဟာ ညီမလေးလား သူရဿဝါ Read Here None
သမ္မတအိုဘားမား မိန့်ခွန်းအကြို ကောက်နုတ်ချက်များ Mr. MarGa Read Here None
နေရာတကာနှင့် သူ့အိမ်အပြန် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
တော်တော်စိတ်ပျက်သွားလို့ပါ ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
မဖွရင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ thit min Read Here None
အမေရိကသမ္မတ အိုဘားမား၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မိန့်ခွန်း kai Read Here None
ဒီညမှ အပီမရရင် ဘယ်ညရှိနိုင်မလဲ? Mobile Read Here None
အဖြေရှာပါရစေ •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
အဓမ္မ လုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု မြောက်.. မမြောက် မင်းနန္ဓာ Read Here None
ရန်ကုန်ညရှုခင်း ထဲက အိုဘားမား (ဓာတ်ပုံပိုစ့်) Mလုလင် Read Here None
ဧည့် သည်လေးများ တောတွင်းပျော် Read Here None
စိတ်အားထက်သန်သောကျောင်း (အပိုင်း-၁) kai Read Here None
နံရံထက်ကပန်းချီနဲ့ ရုပ်လုံးကြွ အနုပညာ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“ကျွန်မတို့ရဲ့ မိခင်စာပေ” လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
စား/သုံး သူပြည်သူလူထုတွေဖက်က ဘယ်သူရပ် မှာလဲ Zato Ichi Read Here None
ကိုခင်မောင်တိုး အမှတ်တရ သီချင်းများ ထုတ်လွင့်ခြင်း Zato Ichi Read Here None
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၈) aye.kk Read Here None
မြတ်ကုသိုလ် ပရဟိတ အသင်း ရဲ့ အလှူငွေ လှူဒါန်းခြင်း zin min aung Read Here None
နော်ဝေနိုင်ငံပိုင်Statkraft ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီး -XXIV Kyaemon Read Here None
တနင်္ဂနွေညအတွက် အပြေးအလွှားလေး Mobile Read Here None
ပန်းခရေ padauk moe Read Here None
ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာနှင့်ဒီမိုကရေစီ မောင်သုည Read Here None
ကယ်ကျပါဦး Courage Read Here None
အလင်းရောင်တန်းအောက်က ဆုတောင်းသံ padauk moe Read Here None
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ များစွာဖန်တီးပေးရန်လိုအပ် aung lay Read Here None
မဟာရာဇာ အံစာတုံး မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အိုးဘားမား နှင့် ဦးသိန်းစိန် တို့ ၏ zeitgeistguy Read Here None
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ် မောင်သုည Read Here None
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀ တန်းကိုသတိရမိခြင်း -( ၂ ) Thu Wai Read Here None
Say my name Silver Twig Read Here None
မဟာရန်ကုန် သူရဿဝါ Read Here None
အင်း လေ လံ မိုချို Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၈) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
Myanmar လား Burma လား အိုဘာမား ကထူးဆန်း Read Here None
စနေညပြန်လာပြီ မောင်ပေ Read Here None
သို့ .. အမေ ရွှေ ကြည် Read Here None
ရွှေစွန်ညိုဘာလိုလို့ဝဲ ဦးခင်ခ Read Here None
စိတ်မာဆတ် ၂ blackchaw Read Here None
“ဘယ်စာဝါ ဘယ်နှစ်ဝါ မောင်သင်မတုံးးးးးးးးးးးးး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
– ရခိုင်အရေးနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် … Yel Kaung Read Here None
“ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက် စစ်ထွက်သည့်ထုံး (၂)” nicolus agral Read Here None
ဒီလူဘာကြောင့်ထွက် pooch Read Here None
ကြားခေတ်ကလူ Courage Read Here None
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇနီး thar ag Read Here None
– ရွှေ မြန်မာ မလေးများ အတွက်– gwa toe Read Here None
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀ တန်းကိုသတိရမိခြင်း -( ၃ ) Thu Wai Read Here None
ကိန်းသေ တွက်ချက် padauk moe Read Here None
အမေ့အား ငါ ကြောက်သည် စိန်ဗိုက်ဗိုက် Read Here None
အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းသံဇဉ် padauk moe Read Here None
အတူတူပါပဲ Courage Read Here None
အစာကို ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးချပြီး ကျန်းမာအောင်နေကြပါစို့ ဦးခင်ခ Read Here None
Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု နည်း Mobile House Read Here None
ဝေးခဲ့ပြီ ပန်းခရမ်းပြာ၏ နောက်ဆုံးခရီး…. မောင်သုည Read Here None
နင်လားဟဲ့ ကံတရား စိုင်း ကွမ်းခေး Read Here None
Save Street Children Inz@ghi Read Here None
ကြွေတော့မယ့်ညနေခင်းလေးများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ၁၀တန်းကို သတိရမိခြင်း Thu Wai Read Here None
Inverter ဝယ်ယူမှု လမ်းညွှန် ဦးခင်ခ Read Here None
မောင်းတောနယ်စပ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်အားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်သူ Yel Kaung Read Here None
MegaTypers.com မှာ ငွေတွင်းရှိတယ် ko zin Read Here None
မ = မိန်းမ လိုချင်တဲ့အလင်းဆက် အလင်းဆက် Read Here None
ရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း-(၇) aye.kk Read Here None
ကျနော်နဲ့ မန်းဂေဇက်ရဲ့ စည်းကမ်းချက် အမှတ် ၁၃ San Hla Gyi Read Here None
“စည်စည်ကားကား ရွှင်ရွှင်ပျော် ကျေးရွာအလှူတော်” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
စွယ်ပေါက္ကံ uncle gyi Read Here None
ဘုရင့်နောင် သတ္တိ နွေဦး Read Here None
စင်္ကြာဝဠာလုံးဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်း အယူအဆ Inz@ghi Read Here None
ရေးစရာမရှိလို့ လျှောက်ရေးတဲ့ သတင်းများ blackchaw Read Here None
မီတာစာရေး နဲ့ သနားစရာ့လူဆင်းရဲ ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
ခင်မောင်တိုး kai Read Here None
ဦးပိစိမူးဖူးတယ် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
ဒါ..အားမနာလုပ်တာ myanmarcitizen Read Here None
“ချမ်းမြေ့ရိပ်ငြိမ် သင်တန်းများ” ခိုင်ဇာ Read Here None
ကြက်တို့၏ မာယာ…။ blackchaw Read Here None
“ဘ၀နှစ်ခုနဲ့ ကျွန်မ” လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
အကာမဲ့ Inz@ghi Read Here None
အဘဖော၏အငြင်းပွဲတွင်မပါဝင်ဖြစ်သော ကျွန်မရဲ့ဝါဒ •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
Michaeljonnyaungpu And The သံသယ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု Read Here None
ပိန်သောသူများ အတွက်ရည်ရွယ်၍ ဦးခင်ခ Read Here None
ခေတ်စားလာတော့မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထဲက အနမ်းများ…။ blackchaw Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၀ ) Foreign Resident Read Here None
အသိသံဝေဂ aye.kk Read Here None
“လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အဆုံးသတ်နိဂုံး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အိမ်လည်းဝယ်ပေးရသေးတယ် house ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ရွှေတိုက်စိုး ဘာလုပ်နေလဲ Shwe Tike Soe Read Here None
စိတ်အိုင်ပက်ခြင်း Inz@ghi Read Here None
“ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက် စစ်ထွက်သည့်ထုံး (၁)” nicolus agral Read Here None
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ နွေဦး Read Here None
ပန်းသုံးပွင့်နဲ့ သုံးရာသီ (၂) ဂျူဂျူး Read Here None
ကမောက်ကမ ဟာသ မှတ်စု မိုချို Read Here None
That’s Life ဂျူဂျူး Read Here None
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို သွားလည်ကြရအောင် Yin Nyine Nway Read Here None
မမဗိုက်များ အတွက်ပါ။ ဦးခင်ခ Read Here None
မောင်ဝါဝါနှင့် “လင်ကြီးမူး” ဖုန်းပရိုမိုးရှင်း သူရဿဝါ Read Here None
ဒူးရင်း ရွှေကြည် ဆနွင်းမကင်း easy cook weiwei Read Here None
စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာမြေ padauk moe Read Here None
ြ့ပုံးလိုက်ပါ သူငယ်ချင်း padauk moe Read Here None
သူ့နေရာနဲ့သူ •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၆) aye.kk Read Here None
ကျေးဇူးတင်ချင် လွန်းလို့ ပါ nozomi Read Here None
အိမ်သာ ဘယ်လို သုံးမလဲ နွေဦး Read Here None
မမြဲခြင်း padauk moe Read Here None
နန်းတော်ရာသူရဲ့မေတ္တာရပ်ခံစာ •*¨နန်းတော်ရာသူ •* Read Here None
လူမေးများနေတဲ့ သစ်မွှေးပင် ဆေးထိုးသွင်းခြင်း Wai Aung Read Here None
ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းက ရွှေတောင်ဦး ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“လှုပ်လှုပ်ရွရွ အလှူဝင်တဲ့ည ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ရုံးသစ်ကြီးမှာ ကုန်းဟစ်ပြီးပျာ high court ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
လူနှင့်အကျင့်များ (၅) ကျော်ထင်နော် Read Here None
`လက်နက်ရောင်းမယ်´ Green Rose Read Here None
နောင်ရိုးဆိုတဲ့မြေ htet way Read Here None
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်မိသမျှ တိမ်မည်း (ခရီးသွားနေည်) Read Here None
နေနိုင်သူများ အကြောင်း စိန်ဗိုက်ဗိုက် Read Here None
တောင်ပေါ်က တယောသံ – (သုံး) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ငလျင် နဲ့ ဆိုင် တဲ့ Android ဆော့ဝ် များ Mobile House Read Here None
လူဆိုတာ aye.kk Read Here None
မြန်ကျင့်ပြည်အတွက် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ကွန်ဂရက်၏ တိုက်တွန်းချက် ကြေးမုံ the great Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၉ ) Foreign Resident Read Here None
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး […] maungmoenyo Read Here None
“သည်တောင်ကို မောင်ဖြိုပါ့မယ်”(EPISODE 11) nicolus agral Read Here None
မိုးညှင်းသမ္ဗုဒ္ဓေ… ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ခရမ်းချဉ်သီးအသုံးဝင်ပုံ Ko Khin Kha Read Here None
Shakespeare ရှိတ်စပီယား မွေးဖွားရာဇာတိStratford-Upon-Avon သို့ Kyaemon Read Here None
Magento has turn into legitimacy ecommerce exhortation Zipper John Read Here None
ငြိမ်းချမ်းရာ တစ်ဇောက်ကန်း Read Here None
ဆက်ရန်ရှိသေးသည် ရွှေ ကြည် Read Here None
ရင်ဖွင့်စာ တစ်ဇောက်ကန်း Read Here None
မရောက်မချင်း သွားကြပါစို့။ Ko Khin Kha Read Here None
ပန်းသုံးပွင့်နဲ့ သုံးရာသီ (၁) ဂျူဂျူး Read Here None
နည်းပညာတိုးတက်မှုက ရေရှည်တည်မြဲလာနိုင်ပါ့မလား manawphyulay Read Here None
ကြင်နာပေးပါ padauk moe Read Here None
လှည့်စားခြင်း padauk moe Read Here None
“ကျောင်းပျော်ကြမယ့်နေ့ရက်များ” •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်း ဇွဲမာန်(အင်းဝ) Read Here None
လူနှင့်အကျင့်များ (၄) ကျော်ထင်နော် Read Here None
မပြီးဆုံးသေးသော ပန်းချီကား padauk moe Read Here None
Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၁၂ ခုအတွင်းအကောင်းဆုံးတည်ထွင်မှု ၂၅ ခု kai Read Here None
အသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးရလိုက်တဲ့ လောဘပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ ဇွဲမာန်(အင်းဝ) Read Here None
သဘာဝအရက် uncle gyi Read Here None
လန်ဒန်က စိန့် ပေါလ် ခရိယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီး Kyaemon Read Here None
ခြင်တွေရှိခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ Mr. MarGa Read Here None
“အဖြေလေးပေးလိုက်ပါတယ် ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ အတွက် အကြိုက်ဆုံးစာမူ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
***တောမှောက်ခံရခြင်း*** maung khinmin Read Here None
မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေဘိုမြို့ အနီးကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ် Mr. MarGa Read Here None
၁၀-၁၁-၁၂ အင်္ဂါZ Read Here None
ငလျင်ဒဏ်ထိပေမယ့် အရင်အတိုင်းရှိနေတဲ့မန်းမြန်မာပလာဇာ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
““ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်တော့လည်းလေ””” •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၅) aye.kk Read Here None
ကြယ်ကြွေကောက်ရသူများ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
သတိ၊နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်တွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ padonmar Read Here None
ဘ = ဘယ်သူ..ဘာသာ… ပြန်ထားတဲ့အလင်းဆက် Read Here None
ကျနော်တို့အတွက်၊သူတို့အတွက် ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ???? surmi Read Here None
ဆုံဆည်းရာဆိုဒ် တတိယဆုရ ဆောင်းပါး ဇွဲမာန်(အင်းဝ) Read Here None
– Deleted by Admin — Yel Kaung Read Here None
ရခိုင်ပဋိပက္ခ နိုင်ငံခြားသံရုံး(၉)ရုံး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (နိုဝင်ဘာ ၉) kai Read Here None
မြန်မာပြည်က အကြီးဆုံးသောရပ်တော်မူ ဆင်းတုတော်ကြီး(ဗောဓိတစ်ထောင်) ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ငတက်ပြား၏ စွန့်စားခန်းများ Game ရွှေအိမ်စည် Read Here None
Facebook News Feed မှာ မိမိမမြင်လိုသော ပို့စ်များအား ဖယ်ရှားခြင်း ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ဒု အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း ရူးများနေလား? Zato Ichi Read Here None
“ကျားကျားမီးယပ် (၂)”(EPISODE 10) nicolus agral Read Here None
သင့်ရဲ့ Hand phone တစ်လုံးဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲသိရဲ့လား Thu Wai Read Here None
စနေညမှာ ဘောပွဲအားပေးကြမယ်ဆိုရင် မောင်ပေ Read Here None
စမူဆာ ရှာပုံတော် မောင်ဘလိူင် Read Here None
လန်ဒန်က ကမ်ဘာကျော် Kew Gardens “ကြူး” ပန်းခြံ – XIII Kyaemon Read Here None
လူနှင့် အကျင့်များ (၃) ကျော်ထင်နော် Read Here None
ဘ၀ ကဗျာ မောင်အာဂ Read Here None
သီချင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ခံစားချက် si tone Read Here None
အိမ်ကလေး နဲ့ ကိုယ် padauk moe Read Here None
ချစ်ကံ (အတွေးကဗျာ) padauk moe Read Here None
မြန်မာပြည်မှာ ၀န်ကြီးများ တန်ဖိုး ကျဆင်းနေကြောင်းသတင်းများရနေ၊ Zato Ichi Read Here None
“ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းလွဲလေး” •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
လွမ်းလိုက်ပါဘိ တက္ကသိုလ်ရယ် moemakha Read Here None
“““အွန်လိုင်းပေါ်ကဂုဏ်အတု””” •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
Sweet Fruit on the World! Juvenilemay Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ မိုးတိမ် Read Here None
မိုးထိမိုးမိရွှေလုပ်သားများ aung lay Read Here None
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၃) aye.kk Read Here None
အွန်လိုင်မှရေဒီယိုထုတ်လွှင့်လိုသူ ဘော်ဘော်များအတွက် ရွှေအိမ်စည် Read Here None
“အကြိုက်ဆုံးသူကိုခန့်မှန်းလိုက်ကြရအောင်” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အထက်အမြင့် က အမှတ် ၂ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
နောင်ရိုးတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ htet way Read Here None
တပ်မတော်သား တစ်ဦး၏ ဘ၀အကြောင်း winmyint oo Read Here None
တစ်ပိုဂရပ်ဖီ ဆိုသည်မှာ အင်္ဂါZ Read Here None
ရင်ခွဲ ရုံ သရဲ (ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရ) မိုချို Read Here None
သူခိုးကလူဟစ်နေသူများသို့ areno areno Read Here None
နန်းခင်ဇေယျာ ကထူးဆန်း Read Here None
ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၄) aye.kk Read Here None
ကိုသစ်မင်းအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်…။ blackchaw Read Here None
တောင်ပေါ်က တယောသံ – (နှစ်) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
လွင့်မျောခြင်း padauk moe Read Here None
မေမေ padauk moe Read Here None
“ကြက်ချေးတန်းနဲ့ပြိုင်ဘယ်သူနိုင် ပဟေဠိအစီအစဉ်” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ပျော့သော မျက်နှာပြင် နှင့် တက်ဘလက်များ အင်္ဂါZ Read Here None
ကြက်တူရွေး စကားပြောနည်းလေး မမလေး Read Here None
လွတ်တဲ့ငါး ကြီးကြီးလား သေးသေးလား မမလေး Read Here None
စာအုပ်စင်-၄(E Book များ) ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ဖရုံ ဂူ ရွှေ မင်း သား Read Here None
G-talk တွေအများကြီးဖွင့်ချင်ရင် ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၈ ) Foreign Resident Read Here None
ဆြာအုပ် နှင့် ဂန္ဓာရီခရီးမှ ဓာတ်သေများ (၇) ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် Read Here None
ဘလက်ချော ပြောချင်တဲ့ Two Piece အကြောင်း…။ blackchaw Read Here None
တောင်ပေါ်က တယောသံ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
သံတွဲမြေစာရင်းဌာန လာဘ်ငွေမပါလျှင်အလုပ်မလုပ် Nu Than Read Here None
သီတင်းကျွတ်မှာ စားစရာ Ma Ei Read Here None
အားလပ်ရက် – ၄ အပျော်၊ အပျက် (ဓာတ်ပုံပိုစ့်) Mလုလင် Read Here None
(OVDR4MM) မိသားစု၏ ပညာရေး အလှူ Eipont Read Here None
အောင်ပန်းမြို့ကို အထက်စီးမှကြည့်မိခြင်း တစ် ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“ကျားကျားမီးယပ် (၁)”(EPISODE 9) nicolus agral Read Here None
ကျွန်တော်တူးဆွခဲ့သော အရေပြားများနှင့် Thu Wai Read Here None
ခင်ခရဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ဖြစ်တည် ဖြတ်ကျော်ခြင်း Ko Khin Kha Read Here None
စမူဆာကြော် ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ကြက်သား အာလူးဟင်း ရွှေအိမ်စည် Read Here None
ဒီလိုမျိုးလေးတွေလဲရှိတယ် myanmarcitizen Read Here None
ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ကမ်းလက်များ မောင်အာဂ Read Here None
ဒီ ကဗျာကို… သိလား အလင်းဆက် Read Here None
ဖန်ဆင်းရှင် padauk moe Read Here None
အဝေးယောက် သူငယ်ချင်းအတွက် padauk moe Read Here None
ကုသိုလ်လား moemakha Read Here None
စတုတ္တအကြိမ်မြောက် မန်းဂဇက်ရွာအလှူတော် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
လူနှင့် အကျင့်များ ကျော်ထင်နော် Read Here None
ဆီးဖြူသီး တောတွင်းပျော် Read Here None
O နဲ့ R ဘယ်သူသမ္မတဖြစ်မလဲ kai Read Here None
“မနေ့ညက ကျွန်တော့်အကြောင်းနည်းနည်း ဖတ်စာ” ရင် နင့် အောင် Read Here None
ကိုပေါက်လက်ဆော့တာခံခဲ့ရတဲ့ အောင်ပန်းဈေးနေ့ -20 ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မိမိပြုတာ ကုသိုလ် တစ်ပါးသူအတွက် အကုသိုလ်။ ကိုခင်ခ Read Here None
လူနှင့်အကျင့်များ (၂) ကျော်ထင်နော် Read Here None
၂၀၁၄ မြန်မာနိုင်ငံလုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးစီမံကိန်းကြီး maungmoenyo Read Here None
မသင်္ကာစရာလေးတွေ ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ Read Here None
မီးသတ်ကား ဆိုပြီး လူတိုက်တိုက် ကားတိုက်တိုက်လုပ်တာတွေ gwa toe Read Here None
ပန်းသီးဝယ်ရင်သတိထား Novy Read Here None
ကြီးမိုက်ဘုရားဖူးနေသည်…Kyeik Hmaw Won Pagoda kyeemite Read Here None
ဆွမ်းခံခြင်းသည် တောင်းခံခြင်းလော နှင့် ဆွမ်းမခံအပ်သော (၆) ဌာန Thu Wai Read Here None
အိမ်ရှင်တွေ လန်းမယ့်ည မောင်ပေ Read Here None
facebook group များသတိထားပါ။ ရွှေအိမ်စည် Read Here None
အသက်ကြီးကြီး ပညာတတ်မိန်းမ htet way Read Here None
မြင်သိရှောင်ကျင့် zaw win Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၇ ) Foreign Resident Read Here None
နော်ဝေက Vieddekke ရေကာတာ အဖွဲ့ကြီး – အဆက်- XXIII Kyaemon Read Here None
လွတ်လပ်စွာပျံသန်းပါ zaw win Read Here None
“စကားနားယောင် မိုးမီးလောင် (၂)”(EPISODE nicolus agral Read Here None
“ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သိထားသင့်ပါတဲ့ အစာနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်း ကိုခင်ခ Read Here None
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး (MP’sV) မောင်ပေ Read Here None
“ခြံထွက်သီးနှံတွေနဲ့အောင်ပန်းဈေးနေ့ ”19 ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
စားစရာထဲက အဆိပ်သင့်ဓါတုပစ္စည်းများ ကိုခင်ခ Read Here None
နေ့တစ်ဝက် လမင်း မြတ်ကျော်သူ Read Here None
ယမ်းစည်ပိုင်း တွေနဲ့ဖောက်ခွဲဘို့ကြိုးစားခဲ့သူ Kyaemon Read Here None
ဟိုရောက်တုန်း ဟိုရိုက်၊ ဒီရိုက် မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
My self မိုး မင်းသား Read Here None
Why you need to seek services of […] zipper john Read Here None
မိတ်ဆက် ကျော်ထင်နော် Read Here None
ဂျော့အိုဝဲ ခြေရာကောက် ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
ဆန်းဒေးမှာ ထမ်းပြေးရအောင် (ငွေထုပ်) မောင်ပေ Read Here None
“စားချင်စရာ ငါးကျပ်တင် တွေပေါတဲ့ အောင်ပန်းဈေးနေ့” ၁၈ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အစားအသောက်ထဲကအဆိပ်များ ( ၁ ) nicolus agral Read Here None
ပြေးကြစို့ -၂ ကထူးဆန်း Read Here None
စကားနားယောင် မိုးမီးလောင် (၁)”(EPISODE 7) nicolus agral Read Here None
မတ္တရာက ဆရာမောင်ဆေးနီလုံး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံအခြေအနေ သူရဿဝါ Read Here None
စနေနေ့ ည ဘောလုံးပွဲတွေလာပြီဗျို့မောင်ပေ Read Here None
ကြို့ထိုးတာကို ရပ်စေလိုလျှင် ကိုခင်ခ Read Here None
အဆိပ်သင့်လက်နှင့်ပန်းပျိုးသူများအတွက် silver hero Read Here None
လျပ်တစ်ပြက်ကလော-17 ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီလထဲမှာ လာမယ်တဲ့ ဘဲဥ Read Here None
UK Dams and Reservoirs XI – Kyaemon Read Here None
ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… အလင်းဆက် Read Here None
၂၁ကြိမ်မြောက် ဥပပါရမီသွေးလှူဒါန်းပွဲနှိုးဆော်လွှာ ဦးကောက် Read Here None
ပွဲဈေး Thu Wai Read Here None
၁၂ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ Khaing Zar Win Read Here None
စိမ်းမြလတ်ဆတ်သော အလှတရားများ 16 ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မုန်းစရာကောင်းတဲ့ Wow Wow Read Here None
ရုံးပတီသီးက ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ကိုခင်ခ Read Here None
“သင်၏ သုညများကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေသည်” ရင် နင့် အောင် Read Here None
UK Dams and Reservoirs X Kyaemon Read Here None
The Rule of Law (or) Supremacy of Law kai Read Here None
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ( Nov 2012) kai Read Here None
How Joomla is Perfect for positive impact of you website zipper john Read Here None
အချိန်ပိုင်းဗီလိန် (သို့) ABC thit min Read Here None
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အတွေး manawphyulay Read Here None
အားလပ်ရက် – ၃ (ဒေးဒရဲ) Mလုလင် Read Here None
“စာအုပ်စာပေ မီးရှို့စေ” nicolus agral Read Here None
“စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ …..တန်ဘိုးမဲ့” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
စိမ်းမြသောမြင်ကွင်းများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သဘာဝဓမ္မ သစ္စာပြ insight ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရဲရဲတောက် ဒိုင်ယာလော့များ may maylay Read Here None
မျှော်လင့်မိခြင်း ရွှေ ကြည် Read Here None
“တစ်ခါကနှင့် ယောဂဆရာများ” surmi Read Here None
ကျန်းမာရေးအတွက် ထိရောက်သော ငါးစားနည်း။ ကိုခင်ခ Read Here None
ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ manawphyulay Read Here None
STUPID&ACTIVE ဘလက်… blackchaw Read Here None
သင်္ချာနည်းနဲ့ ငါးပေါင်းကြော် Ma Ei Read Here None
ကောင်းကင်ပြိုတဲ့နေ့ဦးကျောက်ခဲ Read Here None
ကင်ဆာရောဂါ ပျောက်စေနိုင်သော ဒူရင်းသြဇာရွက် thar ag Read Here None
“အိုဘယ့် ဒစ်စနီ” မိဂီ Read Here None
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု ပြီးသကာလ
ဟိုပို့ စ် ဒီပို့ စ်များကို
ခရီးက ပြန်ရောက်ပြီလား မောင်အံ ရေ့။ :hee:
တစုတစည်းတည်း ရှာလို့ရလို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်။
ကျေးဇူးတွေမလိုပါဘူးယောင်းမရယ် ယောင်းမအတွက်ဆို မောင်ငယ်အံစာသိင်္ခသူရ ကအသက်ပင်သေသေတဲ့ :harr: :harr: :harr:
အားပေးတွားဒါ ကျေးကျေး ..
တစ်ခါ ကလစ်လို့ အားမရသေးရင် ..
ထပ်ခါထပ်ခါသာ ကလစ်ပေဒေါ့ ..
ဟုတ် ….. အရီး …
ပြန်ရောက်ပါပြီ ခင်ဗျ …
ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ ..
☼ ခိုင်ဇာဝင်း၊ မမဂျီး မရွှေကြည်
ကျုပ် မမဂျီး ကြောဒါဒွေ အမှန်ဒွေဘဲဂျ ..
♪ .. ♫ .. စေလိုရာ စေ .. ♫ .. ရေမြေ ဆုံးစေတော့ .. ♪ .. ♫ .. ခင့်အတွက်ဆို အသက်ပင် သေသေပေါ့ .. ♫ .. ♪ ..
လေပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် အိပ်ချင်တယ်
အီးပုံနဲ့ တိုးဒါဂေါ ကျုံဘူးဘာဒလား ဒဂါဒေါ် …
တစ်ခါတစ်ခါ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွားချင်ပေမယ့် သံယောဇဉ် သတိပေးတယ် …
နင်တစ်ကယ်သွားမှာလားတဲ့ … ရုန်းမထွက်နိူင်ဘူး သူ့နှိုးချက်က …
ဒီကြိုးထဲမှာ ရစ်ပြီးရင်းရစ် … နစ်ပြီးရင်းနစ်ပဲ …
အထက်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ လူတွေကတော့
ကကြမယ်ဆိုရင် လူရွှင်တော်ကတော့ ငှားနေစရာမလိုလောက်ဘူး
တစ်ညပျော်ခြင်ရင် KTV သွား
နှစ်ရက်ပျော်ခြင်ရင် စနေ တနင်္ဂနွေမှာ ဘောလုံးပွဲးလောင်း
နောက်ဘ၀ထိ ပျော်ခြင်ရင်တော့ ကုသိုလ်များများ လုပ်သွားတဲ့
အဲဂလို အဲဂလို ဘုန်းဘုန်း
တစ်လတစ်လ ကျုပ်စိတ်ဝင်စားဒါ ညည်းပို့စ်လည်း ပါဒယ်အေ့..
(ပို့စ် ဟူသော စကားလုံးကို ဖျောက်မဖတ်ရ…)
ညည်းရဲ့ စာပါအောင် ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ချင်လို့ပါအေ…
အယ် .. ဒီမျက်စိကလည်း လျမ်းလိုက်တာမှ လွန်ပါရောလား …
ဒီစာကို ဒီလို မြင်လိုက်မိတယ်ကွာ …
ကျုပ် စိတ်ဝင်စားဒါ ညည်းကိုအေ့
အံစာတုံးတို့ လျမ်းချက်က အိုက်ဂလိုပါဆို …
ကွန်မန့်ဖြင့် ဝင်ရောက် အားပေးသွားကြသူ အပေါင်းကို
ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျ …
သူ့ ရဲ့အံဖွယ် စေတနာ ယနေ့ ပို့ စ်မှာ
မလျော့ လုံလ ပြုပါဗျ
(သိချင်းလေးနှစ်ပုဒ်နဲ့ ) ဂုဏ်ပြုချင်သဗျ
အံ=ဘာပဲ လုပ်ရ လုပ်ရလေ
အသက်များပင်ဆုံးတော့ မတုန်လှုပ်ပါမေ
မ= အားနာလိုက်တာ အချစ်ရယ်
အား ….. အား……နာလိုက်တာကွယ်
ငါလေ ရွှေ့နေရဦးမှာပေါ့နော် ဟုတ်စ အားပေးခဲ့တယ်ဗျို့
ကျနော်ရဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ….ဆိုတာတွေရေးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ အများကြီးဖြစ်နေတော့ ဘယ်ကစရေးရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ လေးဖြူဆိုခဲ့ တဲ့ အတိုင်းပေါ့။ လမ်းလျှောက်ရင်း တွေးရင်းငေးရင်း ခဏလေးပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် တကယ်တော့ အားလုံးဟာ ခဏလေးတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါဆိုတာတွေလည်း အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ဦးနော်။
ခုချိန်ထိဆိုဆုပေးတာ ၄ ကြိမ်ရှိရာမှာ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ စာပေတွေက သုံးကြိမ်ဗိုလ်ဆွဲထားပြီး ကိုယ်တွေ့က တစ်ကြိမ်ဗိုလ်ဆွဲထားတယ်.. စစချင်းတုန်းက ကိုရဲစည်ပြောတုန်းက ရသစာပေဆိုလား၊ ခုနောက်ပိုင်းတော့ စိတ်အာဟာရ၊ ပညာဗဟုသုတစာပေတွေ ထိပ်ဆုံးရောက်နေပါတယ်..
ခုနိုဝင်ဘာအတွက်တော့ အိမ်သာအကြောင်းရယ်၊ ကိုဆာမိရဲ့ ပဲဆီအကြောင်းရယ်တော့ မြင်နေမိပါကြောင်း..
ဒီပို့စ်မှာ ကျေးဇူးတင် စကားပြောမလို့ပါဘဲ။
ကျော်ကျော်သွားတဲ့ ကပ်ကျော် ပို့စ်ဖြစ်နေတယ်။
ကော်မန့်တွေလဲ ဒီထက်များသင့်တဲ့ ပို့စ်တခုလို့မြင်ပါတယ်။
ပို့စ်ရေးသူရဲ့လက်တွေ့ ပရဟိတ စိတ်ဓာတ်လေးကို ချီးကျူးရမှာပါ။
တခြားသော ပို့စ်တွေမှာ အလ္လာပသလ္လာပ ပြောဖြစ်နေကြ(ကျနော်လဲပါပါတယ်)
ဒီလိုပို့စ်မျိုးမှာလဲ တင်ပေးသူအားရှိအောင် “ကျေးဇူးပါ ကိုအံရယ် ” လောက်တော့
ကျနော်လဲ နောက်ကျစွာ ကျေးဇူးတင် စကားပြောရလို့ ခွင့်လွှတ်ပါအုန်းလို့။
အများ အကျိုးဆောင်တဲ့ ကိုအံလေး လိုရာဆဒ္ဒပြည့်ပါစေ။
ယခုလို လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဆရာသစ်တို့ ခုလို လာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်မှာ အင်အားတွေ တိုးပွားရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဆရာသစ် ပြောတဲ့ထဲက “ကပ်ကျော်ပို့စ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ယခုပို့စ်လေးမှာ လာရောက်၍ ကွန်မန့်များ ပေးသွားကြတဲ့ ဂဇက်ရွာသူရွာသား အပေါင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ခင်ဗျာ။
တစ်ခါတစ်ခါ မကျေနပ်သမျှတွေ ကော်တုပ်ချင်တယ်
တစ်ခါတစ်ခါ Bora Bora ကိုအပန်းဖြေထွက်ချင်တယ်
တစ်ခါခါ အန်စာတုံးခေါက်ရင် ၆ ဂဏန်းချည်းပဲကျချင်တယ်
တစ်ခါတစ်ခါ လောကကြီးကို :harr: တိုက်လိုက်ချင်တယ်
လောကကြီးကို ဟား မတိုက်ချင်နဲ့ ..
လောကကြီးက မင်းထက် သာတယ် .. တဲ့ ..
အတော်လေး တစ်ခါတစ်ခါမှ ဝင်ဖြစ်သူတွေအတွက် အင်မတန်ကျေးဇူးများတဲ့ စုစည်းမှုပါဗျ
ချစ်သူ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
အသက်ရှင် နေထိုင်ချင်မိတယ် …
အခုမှ မောင်အံစာရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပါတော့တယ်
ဦးမာဃလဲ ဖတ်ရွေးဝင်မှ ဒီဇယားကို သုံးဖြစ်တာမို့လို့
မောင်အံဇာ ရဲ့ ယနေ့ပို့စ်က
ကျုပ်တို့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ အတွက်တော့
ဒါနဲ့ ဇဂါးမစပ်…ယနေ့ပို့စ်(နိုဝင်ဘာ)ကို အပ်ဒိတ်လေးလုပ်ပေးအုံးနော်.. :hee:
ဂနေ့ ညကျမှပဲ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းထဲ
ပို့စ်တွေကို အက်ပဒိတ် လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်ဗျ ..
လာရောက်အားပေးတာ ကျေးကျေးပါ ဦးကြီးမိုက် ခင်ဗျာ …
တစ်လတာ ပို့စ်ကောက်ယူမှု ပြီးစီးပါပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း …
လာရောက်ကာ ကွန်မန့်များဖြင့် အားပေးသွားကြပါကုန်သော
ရွာသူားအပေါင်းအားလည်း ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း …
အရောင်ရင့် မှာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ အတွက် ကိစ္စမှာ
မင်းရဲ့ နှလုံးသွေး နဲ့ ရေးထား တဲ့ “ယနေ့ပို့စ်” သာ မရှိရင် သတင်း ရေးဖြစ်တော့ မယ် မထင်ဘူး။
ဖတ်ရွေးတွေ အတွက်တင် အသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
ရွာထဲမရောက်တာကြာလို့ ကိုယ်သန်ရာ စာလေးတွေ ပြန် ရွေးဖတ်ချင်ခဲ့ရင် ယနေ့ပို့စ် မှာ ကြည့်ပြီး ရှာဖတ်ရတာ အင်မတန် လွယ်ကူ ပါတယ်။
ရွာ့ရဲ့ ရတနာပို့စ် လို့ သတ်မှတ်လို့ ရသမို့ ဖြစ်နိုင်သ၍ အရှည်တည်စေရန် ဆုတောင်းလိုက်ပါကြောင်း။